आजभोलि आँखा कमजोर नभएको मानिसहरू हुँदैनन् । बच्चाको आँखामा समेत चस्मा लगाएकै हुन्छन् । कम्प्युटरमा लगातार बसी रहँदा आँखा कमजोर हुने समस्या हुन्छ । निरन्तर मोबाइलमा हेरी रहँदा पनि आँखा कमजोर हुन्छ । आँखाको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरा देख्न नसक्नेलाई थाहा हुन्छ । तै पनि आँखा मानव जीवनको लागि निकै महत्त्वपूर्ण र नभई नहुने अङ्ग हो ।
आँखाको ज्योति राम्रो बनाउन घरेलु खानेकुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । आँखा कमजोर हुने कारण खानेकुराले गर्दा पनि हो । त्यस कारण घरमै पाइने यी सामग्रीबाट प्राकृतिक रूपमै आँखाको ज्योति राम्रो बनाउनुहोस् ।
पालुङ्गोको जुस : हरियो पात भएको साग र तरकारी आँखाका लागि लाभदायक हुन्छ । हरियो तरकारीको सुप पनि स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ । दिनदिनै एक गिलास पालुङ्गोको जुस पिउँदा भरपुर मात्रामा भिटामिन ए प्राप्त हुन्छ ।
गाजरको जुस : आँखाले धमिलो देख्न थाल्यो भने दिनदिनै गाजरको जुस पिउनुस् । एक गिलास गाजरको जुसमा एउटा गोलभेँडाको रस मिसाएर पिउँदा धेरै लाभ प्राप्त हुन्छ । एकाबिहानै यो मिक्स जुस पिउन थाल्नुस् ।
हरियो सागपात : आँखाका लागि क्यारोटिन लाभदायक हुन्छ र हरियो सागपातमा यो तत्त्व भरपुर भेटिन्छ । यसले आँखाको पुतलीमा सकारात्मक असर पार्छ । यसलाई आफ्नो आहारमा अवश्य समावेश गर्नुस् ।
ओखर : ओखरमा ओमेगा ३ फ्याट्टी एसिड भरपुर हुन्छ । आँखाको ज्योति बढाउन बच्चाहरूलाई नियमित रूपमा ओखर खुवाउनुस् ।
भिटामिन : शरीरमा भिटामिनको कमी हुँदा आँखा कमजोर हुन्छ । आफ्नो आहारमा भिटामिन ए, बी, सी र ई भएका आहार समावेश गर्नुस् । सुन्तला, मौसम, केरा, लौका, किवी, भेडे खुर्सानी, हरियो सागसब्जी र भूइँकटहर जस्ता खानेकुरा खानुस् । बदाम, जुस र दूधबाट बनेका आहारले पनि फाइदा गर्छन् ।
बदाम : बदाम आँखाका लागि लाभदायक हुन्छ । राती पानीमा बदाम भिजाएर बिहान खानुस् । यसले आँखा पनि बलियो बनाउँछ अनि स्मरण शक्ति पनि बढाउँछ । बदाममा सूप र मिस्री मिसाएर खाँदा पनि लाभ हुन्छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बुधबार, फाल्गुन १२, २०७७ २२:१९:५६
४ हस्पिटलद्वारा कोरोनाका बिरामी भर्ना गर्न नसक्ने घोषणा
प्रादेशिक अस्पतालमा आठवटा भेन्टिलेटर जडान
३० हजारको रेम्डिसिभिर १ लाख २० हजारमा बेच्ने युवक पक्राउ
‘सिटि भ्यालु’ के हो ? यो घटी वा बढी हुँदा के हुन्छ ? डा. रवीन्द्र पाण्डे
कान्ति अस्पतालमा एकैदिन पाँच बालबालिकामा सङ्क्रमण